सोनमको फेसन किन सधै विवादित बन्छ ? | Radio Makalu 102.1 MHz Websoft University
सोनमको फेसन किन सधै विवादित बन्छ ?
गएको बर्ष स्टारडस्ट अवार्डको रेड कार्पेटमा सोनम कपुरमा सबैको ध्यान खिचियो । कारण थियो, उनको पहिरन । झट्ट हेर्दा नग्न जस्तो देखिने पहिरनमा ठाँटिएकी सोनमले जसै रेड कार्पेटमा पाइला राखे, हजारौं आँखा उनीतर्फ तेर्सिए ।
यो अपवाद थिएन । सोनमले थुप्रै पटक पहिरनको कारण चर्चा पाए, आलोचना पनि । खासगरी उनी बलिउड इभेन्टहरुमा यस्तो पहिरन लगाउँछिन्, जसमा छाती उदाङ्गो हुनेगर्छ । सोनमको बोल्ड गेटअपले जिब्रो टोक्न बाध्य बनाउँछ ।
सोनम कपुरलाई चिनाउने केहि विशेषण छन् । जस्तो कि, उनी एकताकाका चर्चित अभिनेता अनिल कपुरकी छोरी हुन् । अर्को चाहि फेसन डिजाइनर । उनलाई बलिउडकी टप फेशनिस्टा मानिन्छ । त्यही कारण हुनसक्छ, उनी फेसनमा नयाँ-नयाँ प्रयोग गरिरहेकी हुन्छिन् ।
फरक कोणको फोटो
उनी अनौठा पहिरनको कारण बिवादमा पनि तानिन्छन् । केहि समयअघि अंग्रेजी अखबारले उनको एक फोटो छापेको थियो, जसको एंगललाई लिएर विवाद भयो । उक्त तस्विर छापिएपछि सोनम निकै दुखी भएको बताइन्छ । कुनै कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकी सोनम कालो पहिरनमा थिइन् । त्यही बेला फरक कोणबाट उनको फोटो खिचियो । उक्त फोटोमा उनको स्तन देखिएको थियो ।
फोटो सोशल मिडियामा भाइरल भयो । धेरैले सोनमको खिल्ली उडाए । अन्ततः उनले मुख खोल्नै पर्‍यो । सोनमले फेसबुकमै लेखिन्, ‘म आफ्नो पहिरनप्रति एकदमै सहज थिएँ । मैले केहि कामको पनि कुरा गरेकी थिएँ । तर, तपाईहरु केवल यो फोटोमा मात्र केन्दि्रत हुनुहुन्छ ।’
बिहेको बोल्ड लुक्स
यस्तै, फेसन डिजाइनर शेला खानको ब्राइडल कलेक्सनका लागि सोनमले एक फोटोशुट गराइन् । उक्त पहिरनमा पनि उनी निकै कामुक देखिएकी थिइन् । उनले पहिरिएकी अफ शोल्डर चोलीप्रति दर्शकले आपत्ति जनाएका थिए ।
म्यागजिनको लागि उदाङ्गो
यसपाली सोनमले भोग म्यागजिनका लागि कभर फोटोशूट गराइन् । उक्त फोटो पनि विवादरहित भएन । आफैले इस्न्टाग्राममा पोस्ट गरेको उक्त तस्विरमा उनी निकै हट देखिएकी थिइन् ।
अर्काले जे सुकै भन्छ
त्यसो त फेसनका सम्बन्धमा सोनमको आफ्नै तर्क र परिभाषा छ । उनले इन्स्टाग्राममा लेखेकी छिन्, ‘म सधै यो मान्छु कि, फेसनले केवल महिलालाई आकर्षक मात्र बनाउँदैन, आत्माविश्वास पनि जगाउँछ ।’
सोनम आफ्नो बुवाबाट फेसन सेन्स लिएर आएको बताउने गर्छिन् ।
सोनम भन्छिन्, ‘तपाई के लगाउन चाहनुहुन्छ, त्यसमा तपाईको निर्णय हुनुपर्छ । मैले लगाएको पहिरनमा अरुले के भन्छ भनेर उनीहरुकै हेराई अनुसार फेसन नगरौ । जस्तो कि, म गर्छु ।’
फेसनमा ओपन सोनम
फेसन डिजाइनरहरुले भन्ने गरेका छन्, सोनम कुनैपनि फेसन गर्नका लागि कतिपनि कञ्जुस्याँइ गर्दिनन् ।
भोग म्यागजिनका फेसन डाइरेक्टर अनिता श्राफ अदजानिया भन्छिन्, ‘सोनम फेसनको लागि आफुलेृ आफैलाई कुनै बक्समा बन्द गर्न चाहन्न् । अर्थात हरेक किसिमको फेसन ट्राई गर्छिन् ।’
12/25/2017 04:02:00 PM